Dharaaro Xusuustood: Prof. Maxamed Siciid Gees – Qeybtii 25aad – Geeska Afrika Newspaper | Hargeisa, Somaliland
Dharaaro Xusuustood: Prof. Maxamed Siciid Gees – Qeybtii 25aad
Haybadle Boqor Haille Salassie: “Warkiinu ma aha mid toos looga jawaabi karo, waayo waxa uu u baahan yahay feker badan. Taariikhda Itoobiya waxay caddaynaysaa in soodimaheedu ay gaadhsiinaayeen Geeskan Afrika ilaa Areebiya (Arabia). Waxa hadda sidan ku soo koobay soodimaheeda, duulimaadkii ay nagu soo qaadeen cadawgayagu iyo dareen la’aanta dadkayaga.
Arrintaan rabo inaan idiin caddeeyo waxay tahay weligeen ma noolaanaynu, sidaa darteed qofku waa inaannu samayn wax hadhaw laga qomamoodo ama laga shaleeyo. Qof kastaa waa kala garan kara xumme iyo wanaag, gef iyo toos. Waxaad hadda na tidhaahdeen ma aha war nagu cusub, Reer Yurub ayaa warkaas oo kale yidhi. Waxa mar hore soo jeedisay in la dhiso Soomaali weyn ninkii Bevin [Wasiirkii Arrimaha Dibedda ee Boqortooyada Midawday (UK) 1945 – 1951]. Waa aannu diidnay soo-jeedintaas oo looga dhan lahaa in dalkayaga lagu googoosto; deeto waa la iska dhaafay soo-jeedintii. Idinku ma tihidin cadawgayaga ee waxaad tihiin Walaalahayo. Cadawgayagu waa ninka saanta cad.